disorders – Healthy Life Journal
အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှု မူမမှန်ရောဂါ (IBS)
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှု မူမမှန်ရောဂါ (IBS) ရောဂါဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှု မူမမှန်ရောဂါ (IBS-Irritable Bowel Syndrome)ဆိုတာက ဝမ်းပျက်လိုက်၊ ဝမ်းချုပ်လိုက်၊...
မိခင်ဆီမှ သမီးထံမျိုးရိုးလိုက်ဖြစ်တတ်သည့် ဝေဒနာ ၁၀ မျိုး
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မျိုးရိုးဗီဇက လူတွေရဲ့သွင်ပြင်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသာမက အားနည်းချက်တွေအပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ မိခင်ကနေ သမီးဆီကို မျိုးရိုးလိုက်ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ ဝေဒနာတွေရှိပါတယ်။ သင့်မိခင်မှာ ဒီမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ဝေဒနာတွေရှိနေရင်တောင် သင့်မှာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်သလဲဆိုတာကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁) အရိုးပါးရောဂါ အရိုးကျိုးနိုင်ခြေမြင့်မားတဲ့ အရိုးအားနည်းမှုအခြေအနေကို အရိုးပါးရောဂါလို့...